हाँसो र आँसुका कुरा
" जीवनमा पैसा कमाउन सकिन तर मलाई दुःख छैन कमसेकम मैले खुलेर हाँस्न र रुन सकेको छु ।"
सा-है हृदयस्पर्सि कुरा व्यक्त गर्नु भयो वरिष्ठ सङ्गीतकार अम्वर गुरुङले जब म केही दिन अगाडि उहाँलाई भेट्न उहाँको निवास बाँसबारीमा मित्र गायक शैलेश सिँहसँग पुगेकी थिए । जीवनका अनगिन्ति भोगाई र अनुभवले खारिनु भएका अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्वको अभिव्यक्तिले मनलाई साँच्चैनै छोयो । सत्य आखिर सत्य हो जसले छुन्छ नै । सङ्गीत तपस्या हो र उहाँ तपस्वी । सारा सांसारिक मोहबाट टाढा भएका तपस्वी जस्तै हुनुहुन्छ उहाँ जसले पैसा र क्षणिक आनन्दलाई होइन आफ्नो मनको चाहनालाई सङ्गीतप्रतिको लगावलाई अगाडि बढाउन सारा कुरा बिर्सी सङ्गीतमा नै लीन हुनुभयो । उहाँहरुकै त्याग र तपस्याको उपज हो आजको नेपाली सुगम सङ्गीत र यसको छुट्टै इतिहास । वास्तविकता यहि हो जो लोभ र मोह भन्दा टाढा छ ऊ नै खुलेर हाँस्न सक्छ र दुःखमा पनि खुलेरै रुन सक्छ । अम्वर गुरुङ्गले आफूलाई ती सांसारिक इच्छा र आकांक्षाबाट टाढा राखी सङ्गीतमा हराउन सक्नु भएर नै त्यो मनको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुभएको हो ।
मानिसको ओठमा फुलेको हाँसो नै उसको खुसीको प्रमाण हुँदो हो त संसारमा कोही दुःखी भेटिन्नथ्यो । किनकि सबैजना हाँसेकै देख्छौँ तर यही हाँसोका वीचमा पनि मानिस किन दुःखले पुरिएको छ ? आज मानिस सम्पूर्ण भौतिक सुख सुविधाले घेरिएरै पनि पल पल आँसु पिएर बाँचेका छन् । अथवा बाँचेको पनि के भन्नु न पूर्णरुपमा बाँच्न सकेका छन् न त मर्न नै ! स्वतन्त्र र स्वतस्फूर्त हाँसो कतै विलाएको छ आजकल अनि पीडा मनभरि छदाछुल्ल हुँदा पनि खुलेर आँसु खसाउन सक्दैन मानिस । तर अभावकै माझमा पनि कोहीभने पूर्णताको आभाष पाँउछन् ।
जीवन यही हाँसो र आँसुमा अडिएको छ । तर यही खुसी र दुःखका माझबाट सम्हालिदै अगाडि बढ्दै गरेको मानिसको बाध्यताको चरम बिन्दु कहिले काही हाम्रो कल्पनाशक्ति भन्दा पनि निकै पर पुग्छ । पलपल मर्नु फेरि झसङ्ग भई बौरिनु अनि हावा फुस्केको गाडीको चक्का जस्तै घससस घिर्सिदै अगाडि बढ्नु ! अनि यस्तै प्रक्रिया दोहोरिरहनु जीवनमा । कस्तो कहालिलाग्दो ! तर यस्तै हुन्छ बारम्बार र सहनै पर्छ आफैले । यस्तो अवस्थामा खुलेर हाँस्नुको कुरा ! उसले सक्ला तर पनि ऊ बाध्य हुन्छ हाँस्नलाई तर त्यो हाँसो मनका कोमल पत्रहरुबाट स्वाभाविक निस्किए झैँ स्वच्छ होला मात्र देखावटी हुनेछ त्यो । बाध्यता अनि गा-हो अवस्थाको निर्णय । खुलेर हाँस्नु त सपना हो आजकल । सबैजना फिस्स दुईपैसे हाँसो सधैँभरि ओठमा नै च्यापी हाँस्नकालागि तयार रहन बाध्य छन् । सबै मानिस हाँसे जस्तै देखिन्छन् तर ती मौन ओठहरुले एकतमासको पीडा ओकलिरहेको प्रष्ट हुन्छ । गालाको छाला तन्किएर दुखिन्जेल मानिस हाँस्छ तर मन चिसो बरफ भन्दा पनि चिसो र ग-हौ भएको हुन्छ । वास्तविक हाँसोले त मनलाई न्यानो र हलुङ्गो बनाउनु पर्ने हो तर मानिस जति धेरै बाहिर हाँस्छ उत्ति नै भित्र भित्रै पिल्सिरहेको हुन्छ । भित्र चाहिँ डढ्दै खरानी हुँदै जान्छन् मानिस ।
मन खोलेर रुनु हाम्रो भागमा होला । आँसु पिएर बाँच्नु र पीडालाई सकेसम्म दवाउनु नै धर्म जस्तो देखिन्छ । सबैजना दुःखी छन् । पीडा, अभाव, अशान्ति र बेदनाले घेरिएका छन् । तर मुटु खोलेर पीडा पोख्ने कोही भेट्दैनौ । घरि घरि अनायासै पीडाका लस्करहरु आँखाका छेउबाट बग्दै गालासम्म आइपुग्छन् अनि मुखमा पसी नुनिलो हुँदा हामी झसङ्ग हुन्छौँ । हत्त न पत्त यता उता हेरी यसो निहुरिएर अरुलाई थाहै नहुने गरी भिजेका परेला पुस्छौँ । किनकि हामीसँग खुलेर रुने साहस छैन । साहस मात्र होइन त्यो स्वतन्त्र चेतना छैन । हाम्रो चेतनालाई असंख्य बन्धनहरुले बाँधिदिएका छन् । हामी चाहेरै पनि ती बन्धनहरुबाट पटक्कै छुटकारा पाँउदैनौ जसले हाम्रो मनको स्वच्छन्दतालाई कैद गरिदिन्छ । स्वतन्त्र पंक्षी जस्तै मन मनैरुपी पिँजडामा घेरिएपछि स्वाभाविक उर्लिने भावनाबाट टाढा हुन पुग्छ । त्यसैले नै नुनिलो आँसु आँखाबाट नभई कसैले नदेख्ने मनबाट मनैमा पोखिन्छ । ती तप तप चुहिएका आँसुले मनभित्र बिस्तारै डुवान ल्याइदिन्छ । एउटा हुँदा खादाको जीवन बग्छ आफ्नै आँसुको भेलमा । जीवन बाँच्न नपाँउदै अन्त्य हुन्छ अमूल्य जीवन ।
यी बन्धन र देखावटी हाँसोलाई त्याग्न कलकलाउदी साम्देन र पासाङ्ग आनी साम्देन र आनी पासाङ्गमा परिणत हुन्छन् । यो मोहको जालोले हामीलाई हलचल गर्नै नसक्ने गरी जकड्छ । हाम्रा अङ्ग प्रत्यङ्गलाई नराम्ररी थला पारिदिन्छ । पक्षघातले विक्षिप्त भएको शरीर जस्तै यी मोह र भौतिक चाहनाले । स्वतन्त्र हाँस्न र रुन सक्छन् सिर्फ अम्बर गुरुङ जस्ता साधक र हाम्रा आनीहरु । हामी जो इच्छा र आकांक्षाका भूमरिमा दैनिक भासिदै छौँ त्यही दलदलमा भासिनै रहन्छौँ आफैभित्रको इच्छारुपी आगोको रापले सेकिदै । दुःखलाई अङ्गाल्न सक्ने साहस र धैर्यता नहुनु नै हाम्रो कमजोरी हो जसले हामीलाई वास्तविक खुसीबाट मिलौ टाढा लैजान्छ । दार्शनिक खालिल जिब्रान भन्छन्- " जति गहिराइसम्म दुःखले तिमीभित्र ठाँउ बनाउछ त्यत्ति नै बेसी खुसी तिमीभित्र समाहित हुन्छ ।"
दुःखको उपस्थितिमा नै सुखको अस्तित्व हुन्छ । हामीले दुःखलाई सा-है हेला र सुखलाई मात्रै माया गर्नले हामी झन झन दुःखी भएका छौँ । जिब्रान र अम्बर गुङ्गका भनाइलाई आत्मसात गर्ने हो भने खुसी हामीसँगै छ ।
खुलेर हाँस्न र खुलेर रुन आफैसँग खुल्न सक्नुपर्छ । आफैसँग खुल्नलाई हामीलाई सिर्फ चोखो मन भए पुग्छ । हामी वरिपरि बाधक हुन आइपुग्छन् हाम्रै मनको अर्को पाटो अनगिन्ति इच्छा र महत्वाकांक्षा । महत्वाकांक्षी मनले इच्छाको उडानमा निकै पर आफ्नै मन भन्दा पनि पर लगी उतारिदिन्छ । जहाँ मनै छैन त्यहाँ हाँसो कहाँ र ? मन छ र सबैथोक छ । केही पाउनुसँग मात्रै सरोकार राख्ने संसारले केही पाउनु अझ खुलेर भन्नु पर्दा भौतिक सुख सुविधामा मात्रै हाँसो-खुसी हुन्छ भनी बुझ्नेहरु र त्यसैका पछि दौडनेहरु त्यही भाग दौडमा नै हराउछन् । उनीहरुलाई थाहै हुँदैन समय बितेको । समयले कोल्टे फेर्छ, जीवनले कोल्टे फेरी मृत्युतिर लम्कन्छ तर त्यो स्वतन्त्र हाँसो र आँसु केवल सपना हुन्छ । जीवन सार्थक हुन्छ या निरर्थक आ-आफ्नो बुझाई ।
२३ फागुन २०६५